The Ab Presents Nepal » प्रकाश सपूत र शान्तिश्री परियारको पारिवारिक कुराकानी भिडियो हेर्नुहोस्!
प्रकाश सपूत र शान्तिश्री परियारको पारिवारिक कुराकानी भिडियो हेर्नुहोस्!
सर्बाधिक रुचाईएको गीत तथा भिडियो ‘गलबन्दी’ले १ करोड भ्युज निक्कै छोटो समयमा पाएको छ । यति छोटो समय अर्थात मात्र १८ दिन भित्र भिडियोले १ करोड भ्युज बटुल्न सफल भएको हो । यो संगै एउटा रेकर्ड पनि कायम भएको छ । यसअघि फिल्म २ रुपैयामा समाबेश लोकप्रिय बनेको गीत ‘कुटुमा कुटु’ले राखेको रेकर्ड ब्रेक गरेको हो । जेठ ११ मा सार्बजनिक गलबन्दी जेठ २८ सम्म आईपुग्दा १ करोड सहित रेकर्ड राखेको हो । हेर्नुस् भिडियो ।
यता ‘कुटुमा कुटु’ २०७४ को जेठ १४ गते सार्वजनिक भएको थियो । असार १ गतेसम्म युटुवमा १ करोड २ लाख ४५ हजार बढी दर्शकले यो गीत हेरेका थिए । अहिले कुटुमा कुटु युट्युबमा १० करोड भ्युज पाउने पहिले नेपाली गीतको भिडियो बनेको छ । यता गलबन्दिको यो रफ्तार हेर्दा छोटो समयमै कुटुमा कुटुको यो अर्को रेकर्डलाई पनि ब्रेक नगर्ला भन्न सकिन्न ।
गलबन्दिलाई जेठ २७ गतेको बिहान सम्म आईपुग्दा युट्युबमा हेर्नेहरुको घुईचो १०,०३३,६२७ पटक छ । यता गीत संगै भिडियो त सर्बाधिक रुचाईएकै छ भने युट्युबमा मनपराएर लाईक गर्ने को संख्या मात्रै ३ लाख भन्दा बढी रहेको छ । डिसलाईक गर्नेहरु १२ हजारको संख्यामा छन् । यस्तै भिडियोलाई प्रतिक्रियाको ओईरो लागेको छ । २४ हजार बढिले भिडियोलाई कमेन्ट गर्दा प्राय: सवैले गीत तथा भिडियो रुचाएका छन् ।
सार्बजनिकको ७ दिन पुग्दा यो गीतको भिडियोलाई ४७ लाख भन्दा बढि पटक हेरिएको थियो भने झन्डै २ लाखको हाराहारीमा लाईक पाईसकेको थियो । गीत तथा भिडियोलाई १७ हजार बढिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । गलबन्दिलाई प्रकाश सपूत र शान्ती श्री परियारले गाएका हुन् । यसको शब्द संगीत पनि प्रकाशकै हो ।
यतिमात्र हैन प्रकास यो भिडियोमा फिचर्ड नि भएका छन भने गलबन्दी भिडियो निर्देशक पनि उनै हुन् । भिडियोमा प्रकाश संगै मोडल अञ्जली अधिकारी भिडियोमा फिचर्ड छन् । यी २ को दोहोरी ले नै गीतको सुरु र अन्त्य हुन्छ । तर गीतको कथा निक्कै मार्मिक ढङ्गको प्रस्तुत गरिएको छ । यतिबेला यो गीतको भिडियो युट्युब ट्रेन्डिगको पनि उत्कृष्ट १० भित्र छ । हामिले यो समाचार तयार गर्दा सम्म युट्युब नेपालको ट्रेन्डिङको चौथो स्थानमा छ ।
धेरै दिन पहिलो स्थान ओगट्दै गीतको भिडियो हाल विश्राम गर्दै ट्रेन्डिङमा झरिरहेको छ । यहि गीतले मोडल अञ्जलीलाई भाईरल बनायो । यो गीतमा उनको लजाउने शैलि र रियल अभिनयको सबैले खुलेरै तारीफ गरिरहेका छन् । प्रकाश आपुतको आफ्नै नामको युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक गरिएको गलबन्दी लाई करण चैसिरले छायांकन गरेका हुन भने प्रबिन भट्टले सम्पादन गरेका हुन् ।
गायक प्रकाश सपूत र गायिमा शान्तिश्री परियार सँग गरिएको रमाइलो पारिवारिक कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् ।